बाबुसँग बदला लिन ८ वर्षीय प्रयास कुँवरको हत्या ! घटनाको बेलिबिस्तार सहित !
मङि्सर १४, २०७५ बिगुल
काठमाडौं । गोंगबुको स्वस्तिका त्रिवेणी गेस्ट हाउसका सञ्चालक प्रवीण कुँवरका ८ वर्षीय छोरा प्रयास मंगलबार साँझबाट हराए । बेलमन इन्टरनेसनल स्कुलमा कक्षा १ मा अध्ययनरत प्रयास उक्त दिन तीन बजे स्कुलबाट घर आइपुगेका थिए । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ ।
त्यसपछि उनले नागार्जुनको जंगलमा लगी गाडीभित्र नै बालकको नाक, मुख र घाँटी थिचेर हत्या गरेको र प्लास्टिकमा पोको पारेर जेब्रा झोलामा हाली म्हैपीस्थित खोलामा फालेको बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ । यद्यपि, उनले घटनामा आफू मात्रै संलग्न रहेको वा अन्य पनि रहेको भन्ने बारेमा केही नखुलाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले महेन्द्रमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, मङि्सर १४, २०७५०८:३१
एनसेल कर प्रकरण : न्यायाधीश नै बिदामा बस्दा सुनुवाइ स्थगित !
धेरै महिलालाई स्तन क्यान्सर हुन्छ, यथार्थ के हो ?
ललितपुरको ७१ प्रतिशत पानीमा दिसाजन्य पदार्थ
पेलेजस्तै एमबाप्पे, अन्ततः फ्रान्सले भेट्टायो आफ्नो आक्रामक फुटबलको लय
‘पुरुष सांसदले सुत्केरीको औषधि खायो भन्ने समाचार लेख्दा लोकतन्त्र गएको थियो, फेरि पनि त्यस्तै समाचार आइरहेका छन्’